Cars : Dealers, Reps. and Showroom
3370 Views0Rates
4, Yadanar St., West Kyaikkasan Ward, Thingankyun Township.
Peugeot Showroom's Gallery
Peugeot Showroom's Profile
Super Seven Stars Company သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်လီဖြန့်ဖြူးရောင်းချသည့် အကြီးမားဆုံးမော်တော်ကား Company တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့ Super Seven Stars Company သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် Brand New ကားများကို ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းနှင့် တင်သွင်းခြင်းများကို ပြုလုပ်လျှက်ရှိပါသည်။Brand New Showroom ကို (၂၀၀၁)ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးအရောင်းပြခန်း (၁၂) ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ Super Seven Stars Company မှ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသောမော်တော်ကား Brand များမှာ KIA , PEUGEOT , DS , KING LONG တို့ဖြစ်ပါသည်။
Special Offer for Peugeot
Peugeot ကုမ္ပဏီကလွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း 1810 ကတည်းက ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ စတင်အခြေစိုက် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီး ပြင်သစ်နိုင်ငံသား Armand Peugeot ဆိုသူမှ Peugeot နာမည်ဖြင့်ပင် coffee mills များစက်ဘီးများနှင့် စက်ပစ္စည်းအသုံးအဆောင် Tools များကိုစတင်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီခဲ့ပါသည်။
1896 ခုနှစ် ပြင်သစ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းစက်မှုထွန်းကားသောဒေသတွင် စက်ရုံတည်ထောင်ပြီး Peugeot ကားများအားစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ Peugeot ၏ ထူးခြားချက်တစ်ခုဖြစ်သည့် Peugeot Logo မှာ ခြင်္သေ့လက်သဲခြစ်ရာဖြစ်ပြီး Toughness (ခွန်အား)၊ Flexibility (လိုက်လျောညီထွေ) ၊ Speed (လျင်မြန်မှု)ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပ္ပာယ်များနှင့် Armand Peugeot မှဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ PEUGEOT ကားများမှာလည်း European Car Of The Year 2017 ဆု၊ Car Buy Car Of The Year 2017 ဆုနှင့် NCAP Safety ဆုများစွာကိုရရှိထားပြီး ၊ ဥရောပအခြေစိုက် ကမ္ဘာ့ဒုတိယမြောက် အကြီးမားဆုံးမော်တော်ကားကုမ္ပဏီတစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်။
Daily Open :
Sunday	- 9:00 AM to 5:00 PM
Yangon - 09 977 442248, 09 977 442259
Mandalay - 09 977 895939, 09 9699 33636
Naypyitaw – 09 977 442203
Peugeot Temporary Showroom Address
Peugeot Showroom's Map
High Grade Image Trading Co.,...
M-3, Shwe Padauk St., Shwe Padauk Yeik Mon,
01 502038 09 5197472
22(B)-23(A), Kaba Aye Pagoda Rd.,
27, Top Star Housing, Cor. of Orchid St. & Lanmadaw St., Beside Junction Zawana (City Mart) St.,
4, Yadanar St., West Kyaikkasan Ward,